: at 1/31/2012 01:00:00 AM
တို့ခေတ်ရောက်ပြီလို့ကြွေးကြော်ရမဲ့ အီး ခေတ် ကြီး မှာ အရာရာ အီး တွေ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေကြရတယ် ။ ဗမာလို အီး က နားဝင်ချိုစရာ မကောင်း လှပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လို အီး ကတော့ နေရာတိုင်းလိုလို သုံးလို့ကောင်းမှကောင်း ဆို ယုံကြမှာလား ။ လာပြန်ပြီ အီးဋီကာ .. ချဲ့လို့ မပြီးနိုင်ဆို အီးခေတ်ကြီးကလည်း အဆုံးအစ မရှိ ကျယ်ပြန့်နေလှပြီကိုး။
အီးခေတ် ရောက်တော့ အီးတွေ သုံးကြ သပေါ့ ကွယ် ။ အရင်က ကြေးနန်းကြိုး (သံကြိုး ) တို့ နေရာမှာ အီးမေးလ်တွေ အစားထိုး လာတော့ ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလည်း ဝင်ငွေ လျော့၊ တွက်ချေမကိုက် ဖြစ်ရှာလေသပေါ့ ။ သူ့ ကြေးနန်းကြိုး ၊ သံကြိုး တွေ က အချိန်လည်းကြာသေး ၊ ဆိုတော့ အီးကြိုး အဲလေ အီးမေးလ် နဲ့က ပို အလုပ်ဖြစ် စိတ်ချရတယ် မဟုတ်လား ။ ဒီတော့ အီးမေးလ်တွေ ပဲ သုံးကြပေမပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အီးကလည်း ရာနှုန်းပြည့် သိပ်တော့စိတ်ချလို့ မရ။ ဟက်ကာ ဆိုလား ဘာလား ခိုးဖေါက်ခံရတာတွေ လည်း ရှိသေးဆိုပဲ ။ အီးသူခိုး လို့ပြောရမှာ ပေါ့ နော်။ အဟက်..။ ရှိသေးတယ် အီးဘွတ်.. E Book ၊ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီး ပညာရှာချင်သူတွေ စာဖတ်ချင်သူတွေ အတွက် အတော်လေး အဆင်ပြေတယ် ။
နောက် အီး တခုက အီးဘေး.. ဟေးဟေး ။ ဝေးဝေး မတွေး နဲ့ အီးဘေးဆိုတာeBay ပါ ။ အွန်လိုင်းလေလံတင်တဲ့ဝက်ဆိုဒ်တခုပေါ့ ။ ဘာလိုချင်လည်း ရမယ် ။ အီးဘေး ပေါ်သာ တက်ရှာ ။မိနစ်ပိုင်း အတွင်း ရနိုင်တယ်။ အပ် ကအစ ။ အဲ.. ဘယ်ထိ အဆုံးလည်းတော့ မသိ ။ ဘယ်မှာပဲ ဆုံးဆုံး ကိုယ့် ခရက်ဒစ် ကဒ် ထဲက ပိုက်ပိုက်လေးတွေ မဆုံး ဖို့ အရေးကြီး ဆုံး ။ ပစ္စည်း ကောင်းလည်း ရ ၊ ဈေးလည်းချို ဆိုတာမျိုး က စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရှာတတ်အုံးမှ။ စိတ်မချရတဲ့ ဆိုက်ကနေ ဝင်ဝယ် မိလို့အနှပ်ခံရ ။ အဆော်ခံရတာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ သတိတော့ ထားရတယ် ။ တခါတုံးကဆို ဒီနိုင်ငံက ကောလိပ်ကျောင်းသား တယောက် အွန်လိုင်းကနေ ဟန်းဖုံးတလုံး ဝယ်လေသတဲ့ ။ သုံးတဲ့ ကဒ်က သူ့ အဖေရဲ့ကဒ်ကို အဖေမသိအောင် ယူပြီးသုံး သတဲ့ ။ အဲဒီမှာ ဝင်တော့ တမျက်နှာပြီး တမျက်နှာ ၊ သူတို့မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေ ၊လိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြည့် ။ နောက်ဆုံး ပစ္စည်း ကိုဝယ်ပါပြီ purchase ဆိုတဲ့ အကွက်ကို နှိပ်တော့ အဆင်မပြေ တချက်နဲ့ မဝင် ၊ နှစ်ချက်နှိပ် မဝင် နဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ နှိပ်လိုက်ရပါသတဲ့ ။ နောက် ၁ရက် နေတော့ ဟန်းဖုံးတလုံး အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပို့သတဲ့ ။ နောက် ၂ ပါတ်လောက် အကြာမှာ သူ့ အဖေ ဘီလ် ရောက်လာတော့ မှ ထောင် ဂဏန်း တန်ဘိုး ရှိတဲ့ ပစ္စည်း အတွက် သိန်းနဲ့ချီပြီးပေးရတော့မဲ့ ကိန်းဆိုက်မှန်းသိရတယ်။ ဒီတော့မှ မျက်လုံးပြူးမျက်ဆန်ပြာနဲ့ ရဲစခန်းရောက် တိုင်ချက်ဖွင့် ။ အီးဆက်သွယ်ရေးကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ရဲအဖွဲ့ ရှိနေလို့တော်သေးတာပေါ့ ။အဲဒီ အလိမ်ခံရတဲ့ ပိုက်ဆံ ပြန်ရ မရတော့ မသိဘူး ။
အင်တာနက်မှာ ပြထားလို့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းက တမျိုး ။ လက်ထဲရောက်လာတဲ့ ပစ္စည်းက တလွဲ ဆိုတာမျိုးကတော့ မကြာခဏကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေပါပဲ ။ ကွန်ပြူတာကို အွန်လိုင်းမှာ ဝယ်တာ လက်ထဲရောက်လာတော့ အုတ်နီခဲလုံး တဲ့ ။ တိုင် လိုက်တော့ သူဝယ်တဲ့ ဆိုက် က မြေအောက်ဆိုက် ။ မြေလျှိုးမိုးပျံဆိုက် တွေ ဖြစ်နေတာလည်း တပုံတပင်။ဒါကြောင့် အစိုးရကလည်း အမြဲသတိပေးတယ် ၊ စိတ်ချရတဲ့ ဆိုက်တွေကနေပဲ အွန်လိုင်းပစ္စည်းဝယ်ဖို့ ။
ထားလိုက်ပါတော့ ကိုယ်ညံ့ ကိုယ်ခံပေါ့နော် ။ ဒီတခါ တွေ့ လိုက်တဲ့ သတင်း က တမျိုးထူးဆန်းပါ့။ ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းက အီးမ တယောက် ကျွတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဖိနပ် တဖက်.. ။ အံမလေး .. ရူးနေလို့လား ဖိနပ်တရံလည်း မဟုတ်သမို့ စီးလို့လဲ မရ။ တဖက်ထဲကို လေလံတင်သတဲ့ ။ မယုံ မရှိနဲ့နော် ။ ဖိနပ်က တဖက်ထဲ ရယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးက မသေးလှ ။ ဈေးမသေးဆို သူက ရာဇဝင် နဲ့ လာသကိုး ။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလို။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ ရက်လောက်က သြစတြေးလျတိုက်ကြီး က နိူင်ငံကြီး မှ ဂျုလီယာ ဂီလာဒ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး ဝန်ကြီးချုပ် .. အော်ဇီနိုင်ငံ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတခုကို တက်ဖို့ ဟန်ပါပါနဲ့ လာသတဲ့ ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပွဲလုပ်မဲ့ အဆောက်အဦကြီး ပတ်လည်မှာ အော်ဇီ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား အဘော်ရီဂျင်း ၁၀၀ လောက်က ဝန်းရံထားပြီး ဆန္ဒပြ အော်ဟစ်ကြသတဲ့ ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာတော့ အခြေအနေမဟန် တာနဲ့ သူမရဲ့ သက်တော်စောင့်တွေ ခြံရံပြီး ကားရှိရာကို အပြေးတပိုင်း သွားစဉ်အခါမှာ ကမ္ဘာကျော်မဲ့ နံပါတ် ၈၊ အပြာရောင်ဖိနပ် ရဲ့ ညာဖက် တဖက် ဟာ ကျွတ်ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့လေသတဲ့ ။
အဲဒီမှာတင် စင်ဒရဲလားတယောက် နာမယ် ကျော် တော့တာပါပဲ ။ကြင်ယာတော်ရှာခံရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့ အဖေါ်မဲ့ ဖိနပ် တဖက်ကို ကောက်ရသွားတဲ့ အဘော်ရီဂျင်လူမျိုးတွေက အီးဘေးပေါ်ကနေ လေလံပြစ်ခံရတာပါပဲ။ လေလံတင်တဲ့ သူကလည်း ကြေငြာထားလိုက်သေးတယ် ။ “Please bear in mind also this isasingle shoe, notapair, so it would be difficult to walk in, unless you're the PM," ”။ သင်သတိပြုရန်မှာ အဆိုပါဖိနပ်သည် တစ်စုံ မဟုတ်၊ တဖက်ထဲသာ ဖြစ်ပြီး ၊ အကယ်၍ သင်သာ ဝန်ကြီးချုပ်တဦး မဟုတ်ပါက ၊ ထိုဖိနပ်ဖြင့် လမ်းလျှောက်ရန် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်... တဲ့ ။ အံမယ်.. ဖိနပ်ကို စီးတဲ့သူက နယ်နယ် ရရ မဟုတ်တော့ သူမရဲ့ နံပါတ် ၈ -Midas - Glorify စီးတော်တစ်ဖက် ကလည်း ကမ္ဘာကျော်သွားလေတာပေါ့။ စစချင်း ကြမ်းခင်းဈေး ၁၄၈ အော်ဇီဒေါ်လာကနေစလိုက်တာ၊ နာရီဝက် အတွင်း ဒေါ်လာ ၂၅၅၀ ပေး ဝယ်မယ် ဖြစ်ရော..( နောက်ထပ် တနာရီ မပြည့်ခင် အချိန်မှာတော့ ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ တန်ဖိုးတက်သွားလေတယ် တဲ့ )။ အံ့ ရော.. လူတွေများ တယ်ရူးကြပေသကိုး ။ ဒါတောင် နာရီပိုင်းလေး ရှိသေးတာနော်.. ဆက်ထားရင် ဆက်တက်အုံးမဲ့ သဘော ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့... ဒါပေမဲ့ ... နောက်ဆုံးမတော့ ဒီလို လေလံတင် ရောင်းချတာဟာ သူတို့ အီးဘေး အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ဥပဒေ အရ တရားမဝင် ပါ ဘူး တဲ့ ။ အကြောင်းကတော့ လေလံတင် ရောင်းချမဲ့ ပစ္စည်း ဟာ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း ဖြစ်ရမယ်တဲ့ ။ အကယ်၍ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း မဟုတ်ရင်တောင် နဂို ပိုင်ရှင် ရဲ့ သဘောတူညီချက် ရှိပြီးမှသာ ရောင်းပိုင်ခွင့် ရှိပါသတဲ့ ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့ ၊ လိုက်နာ လေးစားကြတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ ဆိုတော့လည်း မမှန်တာ မလုပ်နိုင်ကြ မလုပ်ကြတော့ နောက်ဆုံးမှာ လူတွေ အလုအယက် လိုက်ဝယ်နေတဲ့ ဒီဖိနပ်ပြာပြာကြီးခမျာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရောင်းချလို့ မရသော ဖိနပ်တဖက် ဖြစ်သွားပါလေ သတဲ့ ။
( ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည် များ အွန်လိုင်းကနေတောင် ရောင်းစရာ မလိုဘူး နော်။ ဘာ အီးဘေးမှ မလိုဘူး ။.. ဂီတအနုပညာ ဖျော်ဖြေပွဲတခု မှာတင် ..သုံး လေးထောင်လောက်သာသာ တန်တဲ့ တီရှပ် အဖြူလေး ၊ အမှတ်တရ. ရှားရှားပါးပါး လက်မှတ်များရေးထိုးထားတဲ့ တီရှပ်ဖြူလေး တစ်ထည် ကို ကျပ် ၁၂၅ သိန်း နဲ့ အလှူဒါနပြု သွားသူများရှိတယ် ။ ဒါကျတော့ အရူးထတယ် လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး ဆိုရင် ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တတ်လိုက်တာ လို့ပြော ချင်ရင်လည်း ပြောကြပေါ့ နော်။)
ဒီဖိနပ်တဖက် ကိုကြည့်ပြီး အတွေးထဲ ရောက်လာတဲ့ ဖိနပ် တရံ ရှိသေးတယ် ။ ပြောရရင် ဒေါပွမှာလား ။သိချင်ရင်ပြောပြမယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်လောက် က အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ မှာ တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဗုံးပေါက်မှု အဲ..အဲ .ဖိနပ်ပေါက်မှုကြီးပါ ။ ကိုယ်တို့ ရဲ့ ခုလက်ရှိ ဘဘကြီး ( ထိုစဉ်အခါက ဘဘလေး ပေါ့ ) အား၊ မိုးတလုံး လေတသီး အမျိုးစုံ ညာရွှီးနေတဲ့ ဘာ ဇွန် ဆို လား ။ အဲ့ဒီလူကြီးက ပေါက်စရာ ရှားလို့ထင်ပါ့ ။ ပန်းနဲ့လဲ မပေါက် ၊ သြဇာသီးနဲ့လဲ မပေါက် ၊ဘဲဥပုပ်နဲ့လဲ မပေါက် ပဲ သူ့ ရဲ့ အယ်ဒို Aldoစီးတော်ဖိနပ် နဲ့ ကောက်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင် စာတင်ရမဲ့ အဖြစ်..။ နှစ်ခါ ပစ်တာ နှစ်ခါစလုံး မှန်တယ် ဆိုပဲ ။ ဘာကို မှန် တာလည်း တော့ မသိ ။ (အခင်းဖြစ်ပွားစဉ် အချိန်မှာ မျက်မြင်တွေ့ လိုက်ကြသူများ ပြောပြပေးဖို့တောင်းဆို ချင်တယ်။ သမိုင်း အစစ်အမှန်ကို ပြန်လည် မှတ်တမ်းတင်နေကြတာ ခေတ်စားနေတယ် မဟုတ်ပါလား ။)အဲဒီတုံးက ဖိနပ်တရံကို ကောက်ရသူများ အီးဘေးမှာ လေလံတင်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်တောင် ဈေးကောင်းရလိမ့်မလည်း လို့ သိချင်စမ်းလှတယ် ။ (ဒါပေမဲ့ ဖိနပ်ပိုင်ရှင်က လေလံတင်ဖို့ သူ့ ဟာသူပဲ ပြန်ကောက်သွားပုံရပါတယ်။အောက်မှ ပုံကိုကြည့်ရင် သိပါမယ်။ )
ဒီပုံကိုတော့ ဒီနေရာမှ ယူထားပါတယ်..
အကယ်၍သာ အဲဒီ အယ်ဒို ကြီးကို ၊ ဂျူလီယာဂီလဒ်ရဲ့ ဖိနပ်ပြာတဖက် လိုမျိုး အီးဘေးမှာ အီးလေလံ တင်ပြီးရောင်းလိုက်ရရင်ရော..အသင်တို့ ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ဈေးအပြိုင်ပေးကြမှာလည်း..... ဟဲ ဟဲ ..။ ဝါသနာပါရင် ဝင်ဆွဲသွားနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား... ...
အော်ဇီဖိနပ်သတင်းတွေကိုတော့ ဒီနေရာ များ မှ ရယူထားပါတယ် ။
အီးခေတ်ကြီးမှာ အီးဘေးများနဲ့ အလျဉ်းသင့်သလို အဆင်ပြေပြေ ရှိနိုင်ကြပါစေသတည်း ။။။
:kiki : at 1/31/2012 01:00:00 AM
Anonymous said... | Tuesday, January 31, 2012 8:31:00 AM
မအိမ်သူ said... | Tuesday, January 31, 2012 2:54:00 PM
အီးခေတ်ကြီးထဲမှာနေမှတော့ အီးနဲ့မပတ်ချင်လို့မှမရတာ မကိရေ.. နေ့စဉ်ဘ၀ထဲမှာ အီးနဲ့လွတ်တာရယ်လို့တောင် ရှိသေးရဲ့ လားလို့စဉ်းစားနေတာ...း))
ညီရဲ said... | Thursday, February 02, 2012 12:15:00 AM
အီး အကြောင်း လေ့လာဖတ်မှတ်သွားပါတယ် မကိ...
ဖိနပ်တစ်ဖက်တည်းများ ဒီလောက် ဈေးပေးဝယ်ချင်ရတယ်လို့ ... မကိ ပြောသလိုဘဲ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး... ဘာဖြစ်ဖြစ် အကျီ င်္က ဝတ်လို့ ရသေးတယ်... ဖိနပ်က တဖက်တည်း ဘယ်လို စီးမလဲ ဟုတ်ဘူးလား...
Anonymous said... | Friday, February 03, 2012 12:58:00 PM
အမယ်လေး မကိ ရဲ့ အီးပိုစ့် ကြီး ကို အခုမှ အီး အဲ ရွှေစင်ဦး ဖတ်မိတော့တယ်
အီး ဗဟုသုတ များ အများကြီး ရသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးနော် အီး ကိ
seesein said... | Tuesday, February 07, 2012 8:33:00 PM
ဖွကိရေ မအီးအားလို့ မအီးရဘူးဗျို့ အီးကုန်သည် တွေလဲ တော်တော်ဆိုးပါလား ...
အခုတလော အီးကိလဲ ပျောက်လှတယ်....
Anonymous said... | Thursday, February 09, 2012 1:36:00 AM
It said That unless you're the PM not unless you'reaPM.
Anonymous said... | Saturday, February 11, 2012 11:12:00 PM